Maxaad u baahan tahay in ay tirtirto fariimaha qoraalka telefoonka Android?
Ma doonaysaa in ay iska bixin telefoonka Android jir, waayo, mid cusub? Waxaa la go'aamiyey in la siiyo telefoonka jir Android inay dadka kale, waxa ay ku deeqaan si ay u Sadaqo, ama la iibsado waxaa? Wax kasta oo xaaladdu tahay, hal shay waa in aad lacag bixisid si aad fiiro waa in SMS ku saabsan telefoonka Android jir muujiyo aad macluumaad muhiim ah shakhsi. Si looga fogaado in, waxaad u baahan tahay in ay tirtirto fariimaha qoraalka ah ka telefoonka ah Android. Xitaa haddii aad wax kama qaba qof xada macluumaadka gaarka kuu ah ka SMS, waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale u baahan tahay in meesha laga saaro fariimaha qoraalka ah oo lacag la'aan ah ilaa meel, gaar ahaan marka sanduuqa fariin u gaadho awoodda ay kaydinta.
Delete farriimaha telefoonka Android mid mid gacanta
Waa in aad ogtahay in aad ka saari kara fariimaha qoraalka ah ka telefoonka aad Android gacanta. On telefoonka aad Android, tuubada Fariin app in ay galaan screen fariinta. Tubada dun iyo tubbada button soo socda si badhanka guriga si ay u muujiyaan menu maamulka fariinta. Tubada fariimaha tirtirto . Markaas, sax ah oo gogo 'oo farriimo aad ku socoto in meesha laga saaro. Haddii aad rabto in aad tirtirto oo dhan, shilinta Dooro oo dhan . Markaas, tuubada Delete .
Faa'iido: gebi ahaanba bilaash ah. Waxaad samayn kartaa. Qasaarooyinka: waqti lumis. Ma heli karaa in ay tirtirto boqolaal ama kumanaan threads waqti.
Delete fariimaha qoraalka ah ka Android in Dufcaddii la qalab
Hayso kun oo threads sms telefoonka aad Android. Si deg deg ah iyaga tirtirto, waxaad u baahan tahay caawimo ka soo saddexaad weydii - qalab xisbiga. The Wondershare MobileGo for Android ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) waa tababare si gaar ah loogu Android. Labada qeybood oo kaa caawin kara inaad si fudud oo dhaqso tirtirto threads SMS badan.
Faa'iido: Delete threads SMS badan waqti. Qasaarooyinka: baahan tahay inaad bixiso (15 maalmood ee ugu horreeya for free).
Download version saxda ah ee aad PC ama Mac iyo hubi tallaabooyinka hoose.
Shaqada version Labada si la mid ah. Halkan, aynu bilaabaya geedi socodka tirtirka Android SMS la version Windows ah.
Tallaabada 1. Isku telefoonka aad Android inay PC Windows ah
The version Windows aad bixisaa laba siyaabood in ay ku xidhmaan. Mid ka mid ah waa in ay furaysto in cable USB in kombiyuutarka ah. Kale waa via WiFi. Dadka isticmaala WiFi, waxaad u baahan tahay in ay ku rakibi MobileGo app qasban tahay inay leedahay qalabka Android aad gacanta.
Tallaabada 2. Delete SMS ka phone Android
Tiirka tagay, guji SMS si ay u muujiyaan suuqa kala maamulka SMS ah. Sax threads aad rabto inaad ka masixi. Si aad u masixi oo dhan, sax sanduuqa ku xiga Content . Riix Delete . In wada hadal pop-up ah, guji Haa si ay u bilaabaan tirtirka SMS ah.
Taasi waa tallaabooyinka fudud ku saabsan sida loo tirtiri fariimaha ku Android phone. Sidaas fudud, miyaanay ahayn? Dhab ahaantii, Wondershare MobileGo for Android ayaa sidoo kale aad ku xoojiya sidii ay u dhoofiyaan iyo gurmad sida XML ama file TXT kombiyuutarka SMS. Haddii aad qoraal badan, waxa kale oo aad kartaa diro fariimo kombiyuutar si ay saaxiibadaa, qoysaska iyo kuwa kale.
> Resource > masixi > 2 Siyaabaha Delete fariimaha qoraalka ee Android Phone